Igwe maka steepụ na n'okporo ámá na n'ụlọ - nkwụsị nkebi
Na nlekọta pụrụ iche ka a ga-ahọrọ tile maka steepụ, bụ nke a na-etinye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe a chọrọ. E nwere ọtụtụ ụdị ewu ewu na uru ha na ụkọ ha dị mkpa ịmara. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dị mkpa iburu n'uche njirimara nke imecha steepụ dị iche iche.
Imecha steepụ na taịl
Usoro nke na-eche ihu nzọụkwụ dị ka itinye ihe dị na mgbidi na ala, ma e nwere ụfọdụ nuances.
Malite site na nkwụsị ụlọ, jide n'aka na elu dị elu. Jiri ọkwa maka nzube a.
Ọ dị mkpa iji hụ na njedebe nke njedebe nke njedebe adịghị atụgharị n'elu ọnụ ọgụgụ nke ihe onwunwe ahụ dị na ya. Iji gbochie e guzobere ibe, dina ngwaahịa ahụ n'ụzọ zuru oke nke mere na ọ gafere elu nke nzọụkwụ.
Ịmecha ihe ndị ahụ na taịlị kwesịrị ịmalite site na n'elu ma gbadaa.
Ọ bụrụ na steepụ ahụ dị n'okporo ámá, mgbe ahụ, enweghị ike itinye ya na kọmpụ nkịtị. Ọ dị mkpa iji ngwaike pụrụ iche a gụrụ maka ọrụ n'èzí. Iji tinye gluu, họrọ trowel na denticles. Maka iji guzosie ike na ọnọdụ a chọrọ, a na-atụ aro ka ị kpaa elu site na hama roba. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji usoro ihe nkedo na-eme ihe iji mee ka ọ dịkwuo ogologo oge.
Okpomọkụ kachasị mma maka ọrụ nrụnye bụ 20 Celsius.
Banyere ezigbo obosara dị n'etiti steepụ, nke a bụ 3-4 mm.
Igwe maka steepụ n'okporo ámá
Mgbe ị na-ahọrọ ihe maka ihu na steepụ n'okporo ámá, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ ghaghị inwe àgwà ndị a: iji nweta ọnụọgụ mmiri dị nfe, iji nweta ihe mgbochi ihu igwe, iji gbochie mmetụta ọjọọ nke ìhè anyanwụ kpọmkwem, ntu oyi, mmiri ozuzo, snow na mgbanwe okpomọkụ. Ugwu ahụ maka steepụ n'okporo ámá kwesịrị ịdị ike iji kwụsị ihe karịrị afọ iri. Maka nkedo, ị nwere ike iji: clinker, ceramiki, paving na tiles.
Igwe maka steepụ n'ụlọ
Iji mepụta otu ime ụlọ, ị ga-eji nlezianya họrọ ihe ndị na-emecha, gụnyere maka steepụ. Okporo osisi maka steepụ n'ụlọ nwere ike ịbụ otu agba, ma ọ bụ ọdịiche. Njikọ nke agba dị iche iche dị na mbụ iji mepụta ọmarịcha mara mma. A naghị atụ aro ka ị jiri ụlọ tile nke otito, ebe ọ bụ na njedebe a enweghị nchedo. Na mgbakwunye, ọ na-ehichapụ ngwa ngwa, deforms, na-emeghachi omume na mgbanwe okpomọkụ na kemịkal ike. Họrọ nhọrọ dị n'okpuru.
Tile na steepụ gburugburu
Ọtụtụ ndị na-ewu ihe owuwu ụzọ mgbochi nke dị n'ihu ụlọ ahụ, ajụjụ ahụ na-ebili - ihe ndị ị ga-ahọrọ maka ihu ndị dị otú ahụ. Ị nwere ike iji ụdị taịlị dịgasị iche iche ma kọwaa ha n'okpuru. Iguzo na steepụ na taịl nile bụ ọrụ dị mfe ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe niile nrụnye n'ụzọ ziri ezi. N'okwu a, a ga-akwụ ụgwọ anya maka isiokwu ọzọ - otu esi egbutu ihe n'ụzọ ziri ezi iji mepụta usoro nzọụkwụ:
Usoro kachasị ewu ewu na-agụnye iji ogwu tile.
Ụfọdụ na-eji ngwa ngwa, ma na nke a ọ na-esiri ike ịkọpụta ọdịdị ahụ achọrọ, na chipped. A ghaghị ịkwanye anya n'akụkụ nhazi a.
Ị nwere ike iji ballerina maka marble artificial, ọ bụ ezie na a na-ejikarị ngwá ọrụ a eme ihe.
Iji mepụta ihe ndị a kpụrụ akpụ, Bulgarian na ịpị na nkume dị mma. A ghaghi iburu n'uche na nhazi dị otú ahụ dịkwuo ike ịrụ ọrụ, a ga-emezikwa ihe ụfọdụ.
A na-agbanye ụkwụ na steepụ
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji mechie eriri ụkwụ dị elu, mgbe ahụ, ọ dị mkpa ịnwale. Ndị ọkachamara anaghị atụ aro ka a na-eji taịlị eme ihe iji wuchaa usoro ndị dị otú ahụ. Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ntụgharị na steepụ, ọ dị mkpa ịkpụ osisi taịlị (a kọwara ụzọ ndị a), n'ihi ya, ọnụ ọgụgụ nke ihe oriri na-abawanye site na ihe dịka 15%. Ịkwado ihe ndị ahụ na taịl nile ga-ebu ụzọ mee ihe na akọrọ, bụ nke na-emesị belata, a na-etinye ihe ahụ n'elu steepụ, na-echefughị ​​ihe ndị ahụ, iji jide n'aka na a na-eme ihe niile n'enweghị njehie.
Na-eche na steepụ ígwè na taịl
Iji mechie staircase, nke e ji etu ígwè na ígwè mee ihe, ị nwere ike iji nhọrọ dị iche iche, ma karịsịa mara mma ikiri nkume dị iche iche. Ọ na-eme ka atụmatụ ahụ dị mma ma na-eme ka ime ụlọ mara mma. Iso nzọụkwụ nke steepụ na taịl kwesịrị ịgafe ihe siri ike: granite, sandstone, basalt na marble. Ihe eji eme ihe n 'uzo bu ihe kwesiri ekwesighi.
Igwe maka ladder nke nkume ga-eguzogide ọgwụ na nrụgide nrụgide, nwere ihe nnweta na mmiri na-eguzogide ọkụ. Ihe isi ike ndị dị na ya gụnyere nnukwu ọnụahịa nke ihe onwunwe na ntinye ya. Ha anọghị na nkume na-arụ ọrụ, nke nwere ebe dị ọkụ, na-adịgide adịgide, na-eguzogide ọgwụ mgbochi, ma a na-anọchite anya ya n'ọtụtụ dịgasị iche iche.
Igwe maka steepụ
Mgbe ị na-ahọrọ ihe owuwu maka ịmecha, ọ dị mkpa iburu n'uche na ha na-akwado ihe ndị dị otú a:
Nwee ndụ ogologo oge ka ị ghara inwe mgbe ị ga-emeghachi mweghachi ma ọ bụ ọbụna rụzie. Họrọ ngwaahịa ndị nwere asambodo dị mma.
Uche ahia kwesịrị ịdị mma ka ndị mmadụ ghara ịda ma ghara merụọ ahụ. A ghaghị iji taịlị ndị na-enweghị ntụpọ maka steepụ mee ihe ma n'ime ime ma n'èzí.
Lelee nkwakọ ngwaahịa maka ike mgbanwe, uru kwesịrị ịbụ BIb 27 ruo ISO 1054-4.
Họrọ shades na textures, na-elekwasị anya n'ozuzu ụlọ ma ọ bụ na-agafe. Jide n'aka na ichi egwu niile nwere udi na nha, ma obughi na nchoputa ya ga adi anya. Lelee na taịl ahụ enweghị ibe, mgbagha na abrasions. N'oge nlele, lelee nọmba ogbe na isiokwu.
E nwere ebe obibi zuru ezu iji mechie steepụ, nke na-agụnye ihe ndị e ji eme ihe nrịgo maka ihe nrịgo, mpempe akwụkwọ, nkwụsị na ihe ndị ọzọ. N'ihi nke a, ị gaghị enwe nsogbu na nhọrọ nke ihe.
Ọ dị mkpa na elu abụghị ihe na-abaghị uru, ma ọ bụghị ájá ga-etinye ya na ya. Akịlị kwesịrị ịdị ka ọ dị mfe ịsacha ma dị ọcha.
Akara sikila maka steepụ
Ruo ọtụtụ afọ, tileti sikila enwewo mmasị na ya, nke nwere nkà na ụzụ dị mma, ihe eji arụ ọrụ na nke anụ ahụ. Akara taịliki na ogbo ahụ nwere uru dị iche iche: nkwụsị ọkụ, ike dị elu, mmiri ntanye mmiri dị elu na ọnụ ọgụgụ dị elu nke nrụgide iyi. Ihe owuwu ụlọ dị otú a dị ọnụ ma chee ihu na ụlọ ahịa ahụ n'ọtụtụ dị iche iche site na ederede, nha, agba na ihe ndị ọzọ.
Mgbe ị na-ahọrọ taịlikiiki maka steepụ, a na-atụ aro ka ị mara onwe gị na akwụkwọ nkwado iji hụ na enweghi ihe na-egbu egbu. Banyere adịghị ike, ha nọ n'ọtụtụ ikpe metụtara nrụnye na arụmọrụ na-ezighị ezi. Nsogbu nwere ike ibili mgbe ị na-azụ ihe ndị na-adịghị mma. Ihe ọghọm nwere ike ịnweta ala nke na-amị amị, nke na-eme ka ọ dị elu, nke na-eme ka ọ dị mma nakwa na ọ dị mkpa ịmepụta elu ala.
Mpempe windo maka steepụ
A na-eji arịa ụrọ a na-ere ihe, nke a na-efesa na okpomọkụ dị elu, nke na-eme ka ndị na-eme ka mmiri bụrụ ihe a pụrụ ịdabere na ya karịa tile. Ọtụtụ ndị na-enwe mgbagwoju anya site na ọnụahịa dị elu nke ngwaahịa, ma ọ bụ onye ezi omume, dabere na ọnụnọ nnukwu uru:
Ihe nkedo nke ntinye maka nzọụkwụ nwere ọdịdị dị mma.
Ihe a na-eyi na-eguzogide, ọ dịghị atụ egwu mgbanwe okpomọkụ na oke iru mmiri.
Elu dị ike, n'ihi ya, ị pụghị ịtụ egwu na ọ dị mfe ileghara.
Ilekọta uzo dị otú ahụ ga-adị mfe, n'ihi na nnukwu ala adịghị ekwe ka ịbanye na ájá na ájá.
Nzọụkwụ site na mbadamba slabs
Ndị na-emepụta ogologo oge kwadoro mmepụta nke slabs, nke kwesịrị ekwesị maka nzọụkwụ. O nwere ebe siri ike maka nchekwa na mgbidi dị n'akụkụ otu. Nrịgo steepụ nke na-eme ihe na-ewu ewu na-ewu ewu, ya mere a na-eji ya na ụlọ ọha na ụlọ. Ihe isi ike ndị dị na ya gụnyere eziokwu na n'oge oyi, elu ahụ na-amị amị na, ma ọ bụrụ na ejighị ya na-arụ ọrụ, elu nwere ike inye ụda ala. Akụkụ ụkwụ nke steepụ nwere uru dị otú ahụ:
Ihe omuma a bara uru, otutu ndi mmadu nwere ike imeli ya.
Ọ bụrụ na a na-eme ntọala ahụ n'ụzọ ziri ezi, a ga-emepụta ọkwa na-eguzogide ọgwụ, nke ga-adịgide adịgide nke ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ.
Ndozi na idozi nke steepụ ahụ, nke a na-ejikarị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, dị mfe.
Akpụ maka osisi maka steepụ
Ebe ọ bụ na ike na ọhụhụ dị ukwuu karịa osisi ahụ, a na-eji ya eme ihe mgbe mgbe maka ihu na steepụ. E nwere nhọrọ ndị ga-enyere aka ịbịakwute ihe okike, ya mere, ị nwere ike igbutu akwa mgbago na tile n'okpuru osisi. Nke a bụ nhọrọ dị mma, dị mma maka ụdị dị iche iche e ji emepụta. N'okpuru osisi nwere ike ịbụ seramiiki, teepu porcelain, teepu clinker na ngwaahịa dị iche iche nke nkume nkịtị.
Tile na nzọụkwụ - larịị taịl nile
Nhọrọ kachasị mma na tileti ihe eji emeeke bụ ihe a ga-eji rụọ ya, nke a na-eme site na ihe ndị yiri ya, mana ọ na-eme na 1300 ° C, nrụgide nrụgide dị 450 kg / cm. N'ihi usoro mmepụta a, a na-enweta ihe onwunwe ogologo oge. Ihe ndị na-adịghị mma gụnyere ala na-amị amị, nke ga-abụ oyi, na ọbụna ihe dị otú ahụ dị oke ọnụ. Okwute ala maka steepụ nwere uru dị otú ahụ:
Ihe onwunwe a dịgidere ma nwee ike dị ukwuu. Ọ bụrụ na ị na-eme nhazi ziri ezi, mgbe ahụ, ihe nchekwa ahụ nwere ike iguzogide nrụgide nke ọtụtụ narị kilogram kwa mita 1.
Ọkpụkpụ ikuku adịghị n'okpuru ọdịdị nke ibe na cracks. N'elu elu ụlọ dị otú ahụ maka steepụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịhụ anya ọhụụ, ya mere maka nhicha ọcha, ị na-ehicha ya.
Ihe omuma a abughi ihe na-adighi mma nke mmiri ma mee ka ìhè anyanwu di.
Ụdị ihe dị otú a nwere oke, ọbụnakwa n'akụkụ ya, ya mere, a na-enweta ihe ndị ahụ na obere ihe. N'ime ụlọ na-echekwa ọtụtụ ihe dị iche iche, dị iche na agba, ụdị na ụdị.
Mgbochi ndị na-emechi ihu ala
Iji belata ihe ize ndụ nke ịda ma merụọ ahụ, ọ dị mkpa ijide n'aka na elu ala ahụ abụghị ihe nkedo. Okirikiri ala maka steepụ n'ụlọ ma ọ bụ na n'okporo ámá nwere ike ịnweta ebe a na-akpọ matte, mgbidi, nchekwa ma dị elu. Na mgbakwunye na n'okporo ámá, iji zere ịmịpụ n'oge ma ọ bụ mgbe mmiri ozuzo ma ọ bụ snow, ị nwere ike iji mkpuchi mgbochi, dịka ọmụmaatụ, teepu na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na teepu a na-etinye na teepu, na ngwongwo.
Ntu ọka na tebụl
Mbido ime ụlọ - imepụta oge a
Ihe ndozi maka ubi
Ihe eji eme osisi
Sofa okpukpu abụọ
Ogwe maka ákwà mgbochi n'ime ime ụlọ ịwụ
Vinyl akwụkwọ ahụaja maka kichin
Igbe nke parquet naanị
A na-edozi ụlọ maka ákwà mgbochi
Ulo maka okooko osisi
Kedu ka esi akpọ onye vampire?
Ngwongwo maka mbara ihu
Ejiji mara mma nke oge mmiri-okpomọkụ
Jelic strawberry jam
Ịkụziri onye ọ bụla akwụkwọ
Ham si toki
Ngwunye nke fir cones
Uterine fibroids - akpata
Ndị ọrịa na-ata ahụhụ
Dandruff - ọgwụgwọ na ndị mmadụ ọgwụgwọ
A na-eji ara ehi mee ka ọkpụkpụ ọkụkọ
Kedu uru nke apụl a mịrị amị?
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ezé nọ na - enwe nsogbu, ọ nweghịkwa dọkịta nọ nso?
Socks na hemp ebipụta
Izu na-ewe oge na onye amaala dị omimi na họtel ahụ
Ngwọta maka colic na ụmụ ọhụrụ
Na-eto eto na chịngọm
Nkume na-ekpuchi ihu